Myanmar Entrepreneur Group: View on Overseas Myanmar Workers
certain condition cube August 26, 2008 at 10:20 AM
Post က အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒီလိုPost တွေ ခဏ ခဏ တင်ပါနော်။ အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒီ Post ကို ဖတ်ပြီးသွားရင် နိုင်ငံခြားသွားမယ့်သူတွေ Opportunity Cost ကို ကောင်းစွာ ချင့်ချိန်လို့ ရသွားပြီ လို့ ယူဆပါတယ်။
စိုးထက် - Soe Htet ! August 26, 2008 at 10:28 AM
ကျေးဇူး ... အေတြု ရေ ... :P
Cypher August 26, 2008 at 2:29 PM
Stanley August 26, 2008 at 2:31 PM
ကိုစိုးထက်ရေ.. ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဒီမှာ သူများသွားလို့ လိုက်ပြီး နိုင်ငံခြား သွားချင်နေကြတဲ့သူတွေ၊ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေသူတွေ များနေသလားလို့။ သူတို့ကို ဒီအင်တာဗျူးလေး ပေးဖတ်သင့်တယ်ဗျာ။
စိုးထက် - Soe Htet ! August 26, 2008 at 3:59 PM
ko ko free August 27, 2008 at 1:17 AM
အေးဗျာ။ ကျွန်တော် တောင် ဖင်လန် သွားမလား စဉ်းစားနေတာ။ (Finland) နိုင်ငံပြောတာနော်။ ကိုစိုးကြီး ပို့စ် ပေးတာ ကြည့်ဘီး စိတ်ကုန်..အဲ...
..( လူကိုယ်ဟန်ပြခြင်းမဟုတ်) တာနဲ့ စင်ကာပူပဲ သွားတော့မယ်လို့ စိတ်ကူး
ထားတယ်လေ။ အဟီး ..အလှူ ရှိလို့။ ။
( ၀ူး..လိုက်..ရှင်းရတာ မောလိုက်တာ..ဟောဟဲ ဟောဟဲ)